Ngwaahịa - Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd.
Ezigbo ihe ngwọta na ọnụahịa kwesịrị ekwesị.
QF3725 Non asbestos akara akwụkwọ
QF3712 Non-asbestos akara akwụkwọ
QF3707 Non asbestos akara akwụkwọ
FBYS408 Non asbestos akara akwụkwọ
Anyị na ngwaahịa na-eji maka engine nke cylinder gasket na ngwa gasket, na elu nrapado roba mkpuchi. Adabara elu okpomọkụ na mmanụ, moderately eguzogide ọgwụ mgbochi, coolant na ndị ọzọ mmiri mmiri gburugburu.
Main ụdị: UFM2520 、 UFM3020 、 UFM3025 / UNM2520 、 UNM3020 、 UNM3025 / SNM3020 、 SNM 3825
Ngwaahịa anyị na-eme mkpọtụ nwere ọrụ iche na ọrụ mgbochi, nke nwere ike iguzogide nnukwu okpomọkụ maka ogologo oge ma nwee oke nbelata mkpọtụ arụmọrụ na usoro braking. Ejikọtara ya na PSA dị iche iche, ọ nwere ike ịchọta ihe dị iche iche chọrọ nke okpomọkụ dị elu ma ọ bụ dị ala.
Main ụdị: SNX5240, SNX5240J2, SNX5240J3, SNX5240J4, SNX6440, SNX6440W, SNX6440J2, SNX6440J3, SNX6440J4, SNX6040, SNX4640, SNX4640-J
Abutment mkpachị usoro
Abutment mkpachị na adhesion ndị dị oké mkpa ka a ezigbo ọrụ nke breeki usoro. Ngwaahịa anyị nwere ike ịkwụsị mkpọtụ mkpọtụ ahụ; melite mkpokọta mkpọtụ Mbelata arụmọrụ nke braking usoro. Ọ nwere ike ịmepụta na ọ na-enye gị a ala na jụụ mbanye n'ihi na ị.
Main ụdị: UNX3025-1, UNX4035-1, UNX5045-1, UNX6055-1, UNX3025-F, UNX4035-F, UNX5045-F, UNX6055-F, UNX5040-FF
Non-asbestos fiberboard usoro
Ihe ị ga-a attentiona ntị na mgbe ị na-etinye ...
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na nsogbu dị na ...
Ọtụtụ okwu chọrọ nlebara anya na ...
Performance mgbe cylinder isi gasket fa ...